Trosa Famoriam-bola ny Fomba fiasa ao Shina - Ny mpisolovava ao Shina. Shinoa rehetra ny mpisolovava an-tserasera.
Manangona trosa accrued tany, na amin'ny alalan'ny Shina no manana aretina isan-karazany toy ny fiteny sy ny sakana ara-kolontsaina ao an-toerana fa ny mahatonga ny olana ho an'ny orinasa maroVahiny lalàna, ny fomba amam-panao sy ny dingana hitarika ho amin'ny zava-tsarotra maro ny orinasa dia tsy mandinika, izay midika hoe ny trosa famoriam-bola ny asa fanompoana mety mila nanakarama ho fanampiana. Famoriam-bola sampan-draharaha misahana dia nokaramaina matetika kokoa hanampy amin'ny fanangonana ny trosa ao Shina ary rehefa olona monina na miasa ao amin'ity firenena ity dia tsy afaka mandoa ny na ny lenders. Ireo sampana ireo dia mahafehy tsara ny fiteny, ny lalàna sy fomba amam-panao ny firenena miaraka amin'ny fahafantarana ny fomba hiatrehana ny sasany ny fomba fiasa. Fanarenana ny vola no zava-dehibe, ary midika izany ny fahafantarana ny zavatra ny atao sy ny fomba miroso amin'ny zavatra ireo. Fomba iray hafa mba hanombohana ny fanangonana ny vola nampindrana na trosa hafa dia ny tambajotra amin'ny orinasa isan-karazany izay efa nanomboka ny dingana ireo. Zava-dehibe ny manana olona izay miteny amin'ny fiteny eo an-toerana, ary izany dia mety mitaky ny fandraisana mpiasa avokoa ny mpandika teny. Ny famoronana fifandraisana any ivelany dia zava-dehibe ho an'ny raharaham-barotra sy ny hahazoana antoka fa ny trosa dia mandray karama tsara.
Ho an'ireo izay tsy mandray karama indray ny monies nananan'ny, izany no zava-dehibe fa ny eo an-toerana ny lalàna sy ny fitsipika dia nankatò sy arahina ho araka ny tokony ho izy.
Ny tambajotram-trosa hetra dia mety hanampy amin'ny dingana ireo, fa raha tsy azo atao izany, ny mpisolovava mety ho ilaina mba hampihatra ny firenena ny fitsipika. Raha toa ny olana dia miaraka amin'ny mpamatsy, ny mpivarotra, ny mpiantoka na ny mpanamboatra, dia mety ho ilaina ny fikarohana fanampiny fomba fitakiana ny fandoavam-bola. Mampiasa ny trosa manangona ny sampan-draharaha ao Shina dia malaza ho antony isan-karazany, fa ireo fikambanana dia afaka ataovy sary mitatitra ny zava-miafina, ary ny zavatra hafa tsy miankina rehefa miatrika isan-karazany ny olona izay mandoa trosa. Ny tompon-trosa manana ny fahafahana mitovy araka ny olona ao amin'ny Etazonia amin'ny fametrahana ny zavatra amin'ny tatitra bola ny mpanjifa. Izany dia mety hitarika ny hafa famoriam-bola sampan-draharaha misahana ny farany dia nitodika izy, saingy izany no mahatonga ny sary nahazoan-olana ho an'ny tsy miankina sy ny olom-pirenena. Raha orinasa maro no miezaka hanangona ireo trosa, ny sasany orinasa ireo marary mba miandry an'ireo izay tsy afaka mividy ny zavatra sasany raha tsy misy ny fanampiana ny mikosoka maro ny zavatra eny amin'ny tatitra bola mba hiverina ny isa ny sehatra tandrify.
Rehefa tsara ny isa bola dia lasa manan-danja bebe kokoa ho toy ny taona maro mizara ho an'ny fividianana fiara, trano sy hanao raharaham-barotra ny orinasa. Midika izany expunging zavatra ratsy momba ny tatitra bola Amin'ny alalan'ny fanangonana ny sampan-draharaha, na ny mpanjifa sy ny orinasa dia afaka mandray soa avy amin'ny iray ifanarahana manampy fandaharana ny fandoavana ny trosa indray.
Ihany no ao an-toerana ny sampan-draharaha ao Shina dia afaka manangona trosa avy amin'ireo izay efa accrued azy ireo. Izany dia midika hoe ny orinasa na ny sampan-draharaha izay miantso ny Shina ny an-trano dia afaka hanatanteraka izany manokana. Izany dia midika ihany koa fa raha ny raharaham-barotra tompon'ny mety mihitsy no miezaka hanangona vola avy amin'ny mpitrosa, dia mora kokoa, haingana kokoa sy tsy mitaky be dia be ny hery na ny vola ampiasaina ny famoriam-bola fahafahana misafidy ny ankamaroan ny fotoana. Ny Minisitry ny Filaminam-Bahoaka sy ny Fanjakana ny Fitantanana ny Indostria sy ny Varotra no mamaritra ireo fepetra izay mamela ihany ny Lalàna Shinoa Orinasa ny fitondran-trosa famoriam-bola amin'ny alalan'ny sampan-draharaha sy orinasa ao amin'ny firenena. Midika izany fa tsy misy hafa ny raharaham-barotra na ny fikambanana dia mety ho tafiditra ao amin'ny fandoavam-bola mahazo ny trosa izay nananan'ny. Indrindra ny fitsipika momba ireo zava-dehibe dia mitovy amin'ny hafa ny fitsipika iraisam-pirenena. Na izany aza, any Shina ny sampan-draharaha nokaramaina sy ampiasaina mba hanangona monies omena fahalalahana bebe kokoa mamorona fomba famoronana mba hahazoana ny vola ary koa ny mihoatra teti-panorona mahery vaika sy ny teknika mba hampiasa. Izany dia mety midika ho fandraisana anjara amin'ny fianakaviana sy ny hafa tia ireo Manamarika ny trosa dia mety ho nalefa tany mpiara-miasa aminy, ireo olon-tiana, ny mpiaramiasa ary ny hafa izay manana fifandraisana amin'ny olona izay ahazoan'ny ny vola. Hafa ny tetika toy ny fametrahana ny famantarana lehibe teo amin'ny fananana no mety hitranga Na izany aza, rehefa ny orinasa na ny olona iray dia mila manangona trosa, dia zava-dehibe ny mahatakatra ny lalàna sy ny fitsipika ny manao izany, na ny raharaham-barotra dia mety ho fanitsakitsahana ireo stipulations. Zava-dehibe ny maka hevitra amin'ny ara-pitsarana mpanolo-tsaina, na mpahay lalàna ka ny tompony ny fikambanana dia mahafantatra ny fomba miroso amin'ny zavatra ireo sy izay sampan-draharaha hitarainana. Mety hoe mivantana ny fandraisana mpiasa avokoa ny trosa anatiny ny fanangonana ny raharaham-barotra. Rehefa ao Shina, izany no zava-dehibe ny manakarama ny mpahay lalàna Sinoa mba hiarovana ny tombontsoan'ny orinasa. Ara-dalàna io professional mety hanana fifandraisana ho an'ny fandraisana mpiasa avokoa ny trosa ny fanangonana ny sampan-draharaha, ary izy, na dia fantany ireo lalàna sy fitsipika. Disclaimer: Raha ny ezaka rehetra natao mba ho azo antoka ny fahamarinan'ny boky ity izao, dia tsy natao izany mba hanome torohevitra araka ny lalàna araka ny olona iray ny toe-javatra dia tsy mitovy ary tokony ho niresaka tamin'ny manam-pahaizana manokana ary na ny mpisolo vava.
Čína Rozvodového Právnika